လက်တင်ဂုဏ်ထူးများမှာ လက်တင် ဘာသာအသုံးပြုရေးသားသည့် စာပိုဒ်တို စကားလုံးများဖြစ်ပြီး ကောလိပ်များ နှင့် တက္ကသိုလ်များရှိ ဂုဏ်ထူးအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကို ဖော်ပြပြီီး ပညာသင်နှစ်ဘွဲ့ပေးအပ်ရာ၌ ရရှိကြခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ဤစနစ်ကို အမေရိကန် နှင့် ကနေဒါ တို့တွင် အဓိကအသုံးပြုသည်။ ၎င်းကို အင်ဒိုနီးရှား နှင့် ဖိလစ်ပိုင် ကဲ့သို့ ဥရောပကိုလိုနီသမိုင်းရှိသည့်အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံ အချို့တွင် အသုံးပြုကြသည်။ တစ်ခါတစ်ရံ၌ ဤစကားစုများ၏ အဓိပ္ပါယ်များကို လက်တင်မူရင်းစာလုံးများအစားအသုံးပြုကြသည်။ ဂုဏ်ထူးနှင့်အတူရ ဂုဏ်ထူးဒီဂရီကို မရောထွးသင့်ပေ။ အချို့နိုင်ငံများတွင်လည်း ဂုဏ်ထူးဆောင်ဒီဂရီ ပေးကြအပ်သည်။ ပုံမှန်အားဖြင့် ကောလိပ်တစ် ...
တမ်းပလိတ်:Infobox residential college ဘုရင့်ကောလိပ်သည် ကောလိပ်ဖွဲ့စည်းပုံအရ ကိန်းဘရစ်တက္ကသိုလ် ၏အခွဲဖြစ်ပြီး ကိန်းဘရစ်ချ်, အင်္ဂလန်၏ လက်အောက်၌တည်ရှိပါသည်။။ ပုံမှန်အားဖြင့် အမျိုးကောင်းသမီးဘုရင့်ကောလိပ်နှင့် စိန့် နီကိုလပ်စ် ကိန်းဘရစ်ခ်ျရှိကောလိပ်သည် ကမ်မြစ်ဘေးတွင်တည်ရှိပြီးမြို့လယ်ရှိ ဘုရင့်စစ်ရေးပြကွင်း ဘက်သို့မျက်နှာမူထားပါစ်သည်။ ဒီကောလိပ်ကို ဟင်နရီ ၆ လက်ထက် ၁၄၄၁ခုနှစ်၌ တည်ထောင်ခဲ့ပြီးနောက် အမွှာညီအစ်မကောလိပ်နောက်တစ်ခုဖြစ်သည့် ဧတန်ကိုတည်ထောင်ခဲ့သည်။ သို့သော် ဘုရင့်၏ကောလိပ်အစီအစဉ်ကို ဝါးရော့ဖ်သည်ရို့စ် နှင့်ရန်ပုံငွေရှားပါးလာခြင်းတို့က ပျက်ပြားစေခဲ့သည်။ ၁၅၀၈ ခုနှစ်တွင် ဟင်နရီ ၇ သည်ကောလိပ် ...
ဆေးပညာမဟာသိပ္ပံဘွဲ့ သည် ဆေးပညာဘွဲ့ရရှိပြီးသူများ အထူးကု အထူးပြုဘာသာရပ်များကို လေ့လာဆည်းပူးပြီးနောက် ကျွမ်းကျင်တတ်မြောက်သည့်အခါ ဆေးကျောင်းများမှ ပေးအပ်သော မဟာဘွဲ့ အမျိုးအစားဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် Master of Medical Science ဟု ခေါ်ကြသည်။ ဆေးပညာမဟာသိပ္ပံဘွဲ့ရရှိပြီးနောက် သက်ဆိုင်ရာအထူးကုဆရာဝန်ကြီးများ၏ ကြီးကြပ်မှုအောက်တွင် အနည်းဆုံး၂ နှစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီးကြောင်း အထောက်အထားပြနိုင်သောဆရာဝန်များကို မြန်မာနိုင်ငံဆေးကောင်စီက အထူးဆေးကုသခွင့်လိုင်စင် ထုတ်ပေးသည်။
ဆေးတက္ကသိုလ် မန္တလေးတွင် ဇီဝကမ္မဗေဒ ဆေးပညာမဟာသိပ္ပံ ဘွဲ့လွန်သင်တန်းကို ၁၉၆၈ ခုနှစ်တွင် စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ရာ မြန်မာနိုင်ငံရှိ ဆေးတက္ကသိုလ်များတွင် ပထမဆုံးဖွင့်လှစ်သော ဆေးပညာမဟာသိပ္ပံဘွဲ့လွန်သင်တန်းဖြစ်သည်။
ဆေးတက္ကသိုလ် ၁ ရန်ကုန်တွင် နှစ်အလိုက် စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သော ဆေးပညာမဟာသိပ္ပံသင်တန်းများ
၁၉၈၇ - နား၊ နှာခေါင်း၊ လည်ချောင်းရောဂါပညာ
၁၉၇၄ - ဆေးဝါးဗေဒ
၁၉၉၁ - ရောဂါဗေဒ
၁၉၇၇ - ကလေးကျန်းမာပညာ
၁၉၉၉ - ကိုယ်အင်္ဂါပြန်လည်သန်စွမ်းရေးဆေးပညာ၊ စိတ်ကျန်းမာပညာ
၁၉၇၂ - ဇီဝကမ္မဗေဒ၊ အရိုးရောဂါပညာ
၂၀၀၆ - ဓာတ်ရောင်ခြည်ဆေးပညာ
၂၀၀၀ - ဥပဒေရေးရာဆေးပညာ
၁၉၇၁ - ခန္ဓာဗေဒ၊​ ဆေးပညာ၊ ခွဲစိတ်ကုပညာ၊ သားဖွား မီးယပ်ပညာ
၁၉၉၂ - မေ့ဆေးပညာ၊ အဏုဇီဝဗေဒ၊ ဓာတ်မှန်ပညာ
၁၉၈၀ - မျက်စိရောဂါပညာ
၁၉၉၃ - ဇီဝဓာတုဗေဒ
၂၀၀၁ - အရေပြားရောဂါပညာ၊ ကင်ဆာရောဂါဆေးပညာ၊ ဆေးရုံအုပ်ချုပ်မှုပညာ
၁၉၈၂ - ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး
ဆေးတက္ကသိုလ် ၂ ရန်ကုန်တွင် ၁၉၇၃ ခုနှစ်က ခန္ဓာဗေဒ နှင့် ဇီဝကမ္မဗေဒ ဆေးပညာမဟာသိပ္ပံဘွဲ့ သင်တန်းများကို စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။
2. မြန်မာနိုင်ငံဆေးတက္ကသိုလ်များတွင် ဆေးပညာမဟာသိပ္ပံဘွဲ့ပေးသော အထူးပြုဘာသာရပ်များ
နား၊ နှာခေါင်း၊ လည်ချောင်း၊ ဦးခေါင်းနှင့် လည်ပင်းခွဲစိတ်ကုပညာ
3. ဘွဲ့ရပြီးသူ အရေအတွက်
ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုလုံးတွင် ၁၉၆၄ မှ ၂၀၁၉ အထိ ဆေးပညာမဟာသိပ္ပံဘွဲ့ရသူပေါင်း ၉၉၄၁ မွေးထုတ်ခဲ့သည်။တပ်မတော်ဆေးတက္ကသိုလ်တွင် ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလတွင် ကျင်းပသော ၂၁ ကြိမ်မြောက် ဘွဲ့နှင်းသဘင်အခမ်းအနားအထိ ဆေးပညာမဟာသိပ္ပံဘွဲ့ရသူပေါင်း ၂၁၃၆ ဦး ရှိသည်။